About | KSID
About KSID Company
ကချင်ပြည်နယ်၊မြစ်ကြီးနားမြို့၊ယုဇနရပ်ကွက်ပြည်ထောင်စုလမ်းမ၊ အမှတ်(၁၅၄)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီးကချင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အများပိုင် ကုမ္ပဏီ KSID ကို ၂၃.၆.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကနေဦးစတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဒေသခံကုမ္ပဏီ (၉၄)ခုဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
KSID Construction delivers its services inanumber of different ways, individually tailored to the needs of the client. Whether you are looking forageneral contractor, construction management or design/build company, you’ve come to the right place.
We assembleaproject team and clarify all owner expectations before construction begins. Each design element will be carefully evaluated as it relates to the construction budget, time and life cycle cost
ကချင်ပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်၏ စီးပွားရေးအခြေအနေကို လေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါက အရေးအပါဆုံးမှာ ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး နှင့် စက်မှု၊ လက်မှုလုပ်ငန်းများမှာ ဒုတိယ နှင့် တတိယနေရာတွင် ရှိသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေး နှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာမြောက်အနေအထားများကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါသည်။
လက်ရှိအခြေခံစီးပွားရေး တောင့်တင်းမှုအပေါ်မူတည်၍ စီးပွားရေးစီမံကိန်းများကို ထပ်မံအကောင်အထည် ဖော်ခြင်းဖြင့် ကျန်စီးပွားရေးကဏ္ဍများကိုလည်း မြှင့်တင်နိုင်ခြင်း
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို တိုးမြင့်၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ စီးပွားရေးကွန်ယက်ကို ပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်း
ခရီးသွားများ အစဉ်အမြဲ ဝင်ရောက် ထွက်ခွာနေသောဒေသဖြစ်သဖြင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ မြှင့်တင်နိုင်ခြင်း
ဒေသအတွင်း အခြေခံ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း၍ စီးပွားရေး အခြေအနေများ ကို မြှင့်တင်နိုင်ခြင်း
U La San
Name: MANAW AHLA CO.,LTD
Established date : 22 November 2007
U Zay Yar Htun
Name : N Hkai Bum
Established date :9October,2013